‘प्रकाण्ड’ प्रकरणले चर्चामा चुलिएकी नारी.....तर कारण के हुनसक्छ ?
काठमाडौं, २५ साउन । प्रायः दरबारमार्गका विभिन्न क्याफे र रेस्टुरेन्टमा टहलिरहेका भेटिन्थे, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाण्ड ।
७ करोड चन्दा उठाएको अभियोगमा प्रहरीले दुई दिन अघि पक्राउ गरी उनलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ । जिल्ला अदालतले छानबिनका लागि ५ दिनको म्याद थपिदियो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चन्दा आतंक बलियै रहेको छ । झन्डै–झन्डै अर्धभुमिगत जस्तो बनेको पार्टीको संगठन विस्तार र खर्च चलाउनका लागि पनि चन्दा रोकिएको छैन । केही ‘होलटाइमर’ कार्यकर्तालाई तलबै दिएर पाल्नुपर्ने बाध्यता एकातिर होला ।
प्रकाण्ड, पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका पर्यटनमन्त्री भएकैले उनको सम्पर्क र सम्बन्ध होटल व्यावसायीसँग नहुने कुरै भएन ।
उनीमाथि लागेको अभियोग, उनी पक्राउ पर्नुको कारणसँग जोडिएकी छन् एक नारी । व्यावसायीक जीवन र सामाजिक काममा अग्रपंक्तिमा रहेकी ति सदाचारी नारीको नाम हो– सृजना राणा ।
राणा ५ तारे होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी निर्देशक, नेपाल होटल व्यावसायी महासंघकी उपाध्यक्ष, जोन्टा क्लव अफ काठमान्डूकी अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाण्डलाई उनकै सुराकका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ ।
तर कारण के हुनसक्छ ?
अन्नपूर्ण होटलको तल रहेको जेम्स हाउस नामको पसल उठाउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि नसकेपछि राणाले प्रकाण्डमार्फत पसल हटाउन दबाब दिइन् ।
जेम्स हाउस हटाए बापत नेकपालाई ठूलो रकम सहयोगको वाचा गरेकी राणालाई प्रकाण्डले बारम्बार रकम हात लगाउनका लागि दबाब दिएका थिए । तर, उनले रकम दिनुको साटो प्रकाण्डलाई उपहारस्वरुप हिरासत देखाएको बताइन्छ ।
मंगलबार प्रकाण्ड हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको सूचना उनले प्रहरीलाई दिएको दाबी गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी सहितको समुहले मंगलबार साँझ प्रकाण्डलाई दक्षिणकाली नगरपालिका टौदहबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले ७ करोड भन्दा बढी चन्दा असुलेको अभियोग लगाइ सकिएको छ ।
प्रकाण्डको पक्राउ प्रकरणले राणाको अहिले चर्चा चुलिएको छ ।
राणा त्यसै पनि विवादमा आइरहने महिला व्यावसायी हुन् । विवादित अन्नपूर्ण होटलमा रहेको ‘क्यासिनो अन्ना’लाई सञ्चालनका बेला पनि उनी विवादमा तानिएकी थिइन् । क्यासिनोकै लागि एक पछि अर्को समुह भिडाएको आरोप राणालाई लागेको थियो ।
राणाले एकस्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दुई समूहलाई दिएपछि स्वीकृति पाएको क्यासिनो इम्पेरियल प्रालिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि अन्नपूर्ण होटलपरिसरमा सञ्चालन भएको अन्ना क्यासिनोमा काम गर्ने मजदुरहरूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको भनी उक्त होटलमा कुनै कम्पनी तथा व्यक्तिलाई क्यासिनो इजाजतपत्र अनुमति दिने कार्य रोक्का गर्नुपर्ने भन्दै पर्यटन विभागमा उजुरी परेको थियो  । त्यस विवादमा पनि राणा तानिएकी थिइन् ।
पर्यटन विभागले उक्त अवस्थामा नै अन्नपूर्ण होटलपरिसरमा प्राइड क्यासिनोलाई सञ्चालनको पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रालयको आदेश भन्दै १६ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिराई पर्यटन विभागले होटल अन्नपूर्णमा प्राइड क्यासिनो सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
प्राइड क्यासिनो चलाउनका लागि राणाले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र देवलाई पनि प्रभावमा पारेको आरोप लागेको थियो । राणाले प्रइडलाई प्रि–लाइसेन्स प्रदान गर्न देवलाई प्रभावित बनाएको बताइन्छ ।
क्यासिनो इम्पेरियलका धिरेन मोक्तान र भारतीय साझेदार आशिष पट्टेल अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दाकै विषयमा उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन यही गएको १९ पुसमा आदेश दिएको छ ।
मुद्दा छिनोफानो नगरी राणाले हायात रिजेन्सी होटलमा प्राइड क्यासिनो सञ्चालन गरेका विनय शाहलाई नयाँ क्यासिनोको अनुमति दिएकी थिइन् ।
विनय शाहले आफ्ना भारतीय साझोदारहरूसँग पैसा लिएर राणालाई बुझाएको आरोप लगाइएको छ । १५ वर्ष क्यासिनो सञ्चालन गर्न २० करोड दिएकोे र राणाले क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएबापत १५ करोड रुपैयाँ घुस दिने सम्झौता भएको बताइन्छ । अहिले विनयले उक्त क्यासिनो चलाइरहेका छन् ।
पहिले अन्ना क्यासिनो बन्द गराउन पनि सृजना राणाकै हात रहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका थिए । दैनिक नेपाल डट कम बाट साभार सामाग्री